sadak – जनदिशा
७० करोडको बाटो एकै झरिले बगायो !
Sahas July 12, 2019	No Comments gorkhasadak
काठमाडौँ । केही दिनअघि मात्र कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको लुइँटेलभञ्ज्याङ-भच्चेक सडकको पहिलो खण्डको बिभिन्न ठाउँको सडक वर्षाले भत्किएको छ । पानी पर्न थालेपछि सडक भत्किन र ग्याभिन पर्खाल पल्टिन थालेको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् । वर्षाले सिरानचोक गाउँपालिका ४ को चिउरीबोट भन्ने ठाउँमा कालोपत्रे गरिएको सडक भत्किएको र सिरानचोक गाउँपालिका ३…
View More ७० करोडको बाटो एकै झरिले बगायो !
महेश भट्टले ‘सडक’को रिमेक बनाउँदै, के रणवीर र आलियाको जोडी देख्न पाइन्छ त ?
janadisha August 2, 2018	No Comments alia bhattamahesh bhattaranbir kapoorsadak
एजेन्सी । सन् १९९१ मा प्रदर्शनमा आएको बलिउड फिल्म ‘सडक’को रिमेक बन्ने भएको छ । ‘सडक’का निर्देशक महेश भट्टले यसको रिमेक बनाउने घोषणा गरेका हुन् । ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्शले आफ्नो अफिसियल एकाउन्टमा सडकको प्रदर्शन मिति समेत पोस्ट गरेका छन् । उनको पोस्ट अनुसार फिल्म २०१९ को नोबेम्बर २ मा…
View More महेश भट्टले ‘सडक’को रिमेक बनाउँदै, के रणवीर र आलियाको जोडी देख्न पाइन्छ त ?